Freedom — MYSTERY ZILLION
September 2009 edited September 2009 in Networking
I have freedom. But I can't register.
MgGyi wrote: »
ပလိ ယူ့စ် သိစ်စ် ပရုပ်ဆီစ်
212.93.193.83 - 443
212.93.193.82 - 443 *
212.93.193.78 - 443
212.93.193.74 - 443
212.93.193.72 - 443
ဒို့မောင်ကြီး အစဉ်ပြေပါစေ :p:p
user name duplicate ဖြစ်တာထင်ပါတယ် ..မတူနိုင်တဲ့ နာမည်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့(number များများပါတဲ့နာမည်)လုပ်ကြည့်ပါ.. ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ.. အဆင်ပြေပါတယ်.. နောက်ပြီ.. ဖြည့်ရမည့်အကွက်တွေမှာလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်မပြည့်မစုံလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. သေချာတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါ..
Thank all guy.
I get account, activation key and Register already finished.
But Aunthentication fail.
It's need money or what.
ကျွန်တော် သိသလောက် ၀င်ဖောကြည့်မယ်နော်..freedom မှာ ပထမဆုံး အကောက်ဖောက်လိုက်ပါ၊ ပြီးယင် freedom ကနေပြီး မေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေးလ်ကို ဖွင့်ကာ activation လုပ်ခိုင်းမယ့် လင့်တစ်ခုပါပါ လိမ့်မယ် ၊ ထိုလင့်ကို ကလင့်နှိပ်ပြီး အတည်ပြုပေးလိုက်ပါ။။activation key လည်း ပေးထားပါတယ်..ဒါပေမယ့် ထည့်ပေးစရာမလိုပဲ တိုက်ရိုက်ပဲ သူအလိုလို ထည်ပြီးသားဖြစ်နေပြီး activation လုပ်လို်က်ယုံပါပဲ..ပြီးယင် freedom ကိုဖွင့် အကောင့်လုပ်ထားတဲံ နာမည် password ထည့်ကာအသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်.
.မှားတာပါယင် ကျွန်တော်တာ၀န်သာဖြစ်ပြီး တခြားမည်သူနှင့်မှ မသက်ဆိုင်ပါ..  :103:
Thank You, all above Man. Especially Ko Moekogo.
I can use now.